सल्यानको श्रीनगरबाट कारीब १ घण्टाजतिमा केहि समय पूर्व नगरपालिका घोषित गरिएको थारमारे नाम गरेको ठाउँ छ । सानो थारमारे नामको बजार पनि छ । त्यही सानो बजारबाट रूकुमको चौरजारी जाने धुलाम्मे बाटो हुँदै १५ मिनेटको पैदलमा १५ वटा गाबिसलाई सेवा दिने थारमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा फराकिलो समथर जमिनमा झोक्राइरहेको छ । समयको रफ्तार सँगै आफ्नो हेरचाह हुन नसकेकोमा दु:ख मानेको जस्तो देखिन्छ । बिजुलीको क्षमता देखी संचारको नाममा टेलिफोनसम्म नहुँदा नगरपालिका भित्रै छु र भन्ने प्रश्न बातावरणमा गुन्जिराखेको हुन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आँगनबाट चारैतिर रहरलाग्दा पातला देखी बाक्ला बस्तिहरु देखिन्छन् । बाँकी भाग पूरै सल्लाका रुखहरुले ढाकिएका छन् । उत्तरितर्फको सानो पहाडको टुप्पोमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ४० मिनेट जतिको पैदल हिंडे पछि सानो बस्ती रहेको छ । सधैंजसो बिहानिपखको ६:३० बजेको समयमा शरीरलाई कसरत पुग्ने मानेर त्यो सानो बस्ती सम्मको उकालो चडेर चौतारीमा बसिराखेको थिएँ ।
"बाबु नयाँ हौ कि ? पैले देक्थेन त। " भनेर एक तिलक लगाएका अन्दाजी ७० बर्षका लौरोले टेकेर हिडिरहेका बृद्धले सोधे । ति बृद्धको मिजास देखेर बोल्न खेर नजाने देखेँ । दुई चार दिन घुम्दैफिर्दै आएको भनेर वास्तविक परिचय लुकाएर कुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मोड्न खोजेँ । छोटो ईतिहास सुनाउँदै बूढाले त्यहाँ काम गरेका पुराना देखी हालका कर्मचारीका बारेमा भन्न थाले । धेरै कुराहरु सुनाएर "जस्तो जे भएपनि हाम्रो अस्पातल त यहि हो बाबु । बिरामी हुन चाँही नपरोस् । त्यहाँ हाम्रो हेरचाह गर्दैनन् बाबु । अंबुलेन्स नि छुइन । "भने । अनी सोधे," त्यो अस्पातलअं एक्स रे छुइन । भिडियो छुइन । क्यारि थाहा पाउँछ हौ डाक्टरले ? छक्क पर्छु । नाडी छामेर अचेल क्यार्नी हौ ?" । त्यो प्रश्नको बाण सिधा आफैमाथि प्रहार भएकोजस्तो लाग्यो । र मनमनै हाँसो पनि लाग्यो । डाक्टरलाई पठाएर मात्रै नहुने त बिचरा गाउँका सोझा दिमागले पनि आँकलन गरिसकेछन् भने म डाक्टरले नाडी छामेर उपचार गरेर पत्याउलान् त ! ७० बर्षका गाउँका बुढाको चेतना त बढिसकेछ भने दिग्गजहरु बसेका सरकारको चेतना साँचै नबढेको हो त ? यदि सुशुप्त अवस्थामा भत्ता र घुमफिरमै रमाएको सरकार हो भने त दु:ख मान्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य जस्तो संबेदनसिल क्षेत्रको सम्बेदना बाँडेर जनताको मन जित्न त सकिन्छ । तर वास्तविक प्रगति कदापि हुन सक्दैन ।
औषधी निशुल्क पाइने भनेर प्रचार गरे पनि जनतासँग सिधा ठक्कर खाने त हामी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक हो । न औषधी समयमा आउँछ न पर्याप्त हुन्छ । स्वास्थ्य केन्द्र रातारात स्तरोन्नती त हुन्छन् । तर ब्यबस्थापन र पूर्वधार पुगेको नपुगेको कसैले हेर्दैन । त्यसैले त जाजरकोट जिल्ला अस्पताल अहिले पनि उस्तै रहेको बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ । यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबै कुराले जिल्ला अस्पताल सम्मको सेवा दिन सक्ने र दिनुपर्ने कुरामा दुईमत देखिन्न । जनसंख्या र स्थान हेर्दा उपयुक्त देखिन्छ । यसलाई पनि अस्पातलमा स्तरोन्नती गर्ने कुराहरु चलिरहेका रहेछन् । जे होस् लोकप्रियताको खेतिपातिको लागि यो राम्रै खेत भएछ । टाठाबाठाको लागि यो जनतामा गफ लाउने कुरो त हुन्छ ! हैन त ।
प्रगति रातारात त हुँदैन । तर क्रमिक बिकास हुनेक्रममा रहेका सम्भावना बोकेका यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा राज्यले थोरै ध्यान दिन सकेमा १० देखी ५ को सेवा लागू गर्ने ढिपीमा खर्च हुने उर्जाले त बिकास द्रुत हुने थियो होला । तिनै बृद्धको प्रश्न म सरकारलाई तेर्स्याउन चाहन्छु । त्यो जनाताको प्रश्न हो । चित्त बुझ्दो उत्तर दिनसकेमा एक प्रती लिखित जबाफ मेरो मेलमा हाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । सक्दो छिटो जनताले चाहिरहेको सेवाको बिस्तार सरकारले गरेको खन्डमा सेवा दुरुस्त हुने थियो कि जस्तो लाग्छ ।
नभए एक पछि अर्को डाक्टर अाँउछन् । नाडी छामेर जान्छन् । त्यस्तै उकालोको दौड्पछि बिश्रामको बेला सबैले त्यस्तै आशा भरिएका बृद्ध भेट्नेछन् । सबै डाक्टरले आफूलाई नाडी छाम्ने डाक्टर भएको महसुस गर्नेछन् । त्यसपछि त एउटा ढ्यांग्रो र जल लिएर बसे फरक पर्ला र ! म धेरै आशा त राख्दिन । त्यहि हो ,अभिभाबक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट भरपुर सहयोगको अपेक्षl राख्दछु । जुन धेरै ठाउँमा प्रभावकारी देखिन्न । तर ति प्रतिनिधि पात्र ७० बर्षिय बृद्धको आशालाई पूरा गर्ने हेतुले सरकारी निकाय (स्वास्थ्य सेवा बिभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय )को ढोका ढक्ढक्याउँदा पहुँच ,राजनीति ,पार्टी ,कमिसन ,चिनजानको आधारमा फिर्ता नपठाइयोस भन्ने आशा गर्दछु । कार्यालय देखि केन्द्रसम्मको असहयोगको राष्ट्रिय समस्या हुँदा लक्ष्य पूरा हुने झिनो आशा राखे मात्र मन शान्त हुने रहेछ । नभए त बर्षौको निस्कृयता र सुस्त प्रगति देखेर मन सधैं पिरोलिने भयो ।
नाडी छाम्ने डाक्टर
२०७३ माघ २६ गते ;बिहान ८ बजे